ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်နိုင်မယ်လို့ အိုဝင်ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့အတွက် ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေစိတ်အေးရပြီ . . |
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲတွေဆို တလွဲတွေချည်းပဲဆက်တိုက်ခန့်မှန်းနေတဲ့ ဆရာကြီးအိုဝင်ကတော့
လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲမှာ သူ့အသင်းဟောင်း လီဗာပူးလ်နိုင်မယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေ စိတ်ချလက်ချနေလို့ရပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်(၈)မှာတုန်းက ဝက်ဖို့ဒ်-လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီး-ဘန်လေ၊ ဘရန့်ဖို့ဒ်-ချယ်လ်ဆီးပွဲတွေမှာသာ ရွေးချယ်မှုမှန်ပြီး ကျန်တဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံး ‘ဂျင်း’ထည့်ခဲ့တဲ့ အိုဝင် ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ဗြိတိန်’ဂျင်း’က ဘယ်လိုအရသာရှိလဲဆိုတာ ထပ်ပြဦးမယ့်အနေအထားပါပဲ။
ပွဲစဉ်(၉)အတွက် ပွဲဦးထွက်ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်-ဗီလာပွဲမှာ (၁)ဂိုးစီသရေကျမယ်ဆိုပြီးတော့ ထိပ်ဆုံးပွဲတည်းက တလွဲခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ အိုဝင်ကို ချင့်ချိန်ပြီးသာယုံကြည်ကြပါတော့ . . .
ဒါပေမဲ့ ကျေနပ်စရာကောင်းတာက ယူနိုက်တက်-လီဗာပူးလ်ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်ကို အနိုင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်း၊ ရလဒ်ပိုင်းတွေအရ လီဗာပူးလ်ကို ပိုကြိုက်မိပေမယ့် အခု အိုဝင်ကလည်း လီဗာပူးလ်ကိုရွေးချယ်ထားလို့ နည်းနည်းတောင် ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမိတယ်။
အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ လီဗာပူးလ်တို့ (၂-၁)ဂိုးရလဒ်နဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်မယ်လို့ အိုဝင်က ခန့်မှန်းထားပြီး ကိုယ်တိုင်က လီဗာပူးလ်ကို ကြိုက်ပေမယ့် အိုဝင်ကြောင့် ယူနိုက်တက်ကို သရေတစ်မှတ်တော့ပေးချင်ပါတယ်။
ဘရိုက်တန်-မန်စီးတီးပွဲမှာတော့ ဘယ်အသင်းနိုင်မလဲဆိုတာ ကလေးကိုသွားမေးရင်တောင်ရလောက်တဲ့ပွဲမျိုးမှာ အိုဝင်က ဆရာကြီးပီပီ မန်စီးတီးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
အိုဝင်က မန်စီးတီးအသင်း(၂-၀)ဂိုးပြတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားပေမယ့် ဘရိုက်တန်အသင်းဟာ အဲဗာတန်ကိုရှုံးနိမ့်ပြီးကတည်းက
ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိဘဲ မန်စီးတီးရဲ့အောက် အဆင့်(၄)နေရာမှာ အံ့အားသင့်စရာရပ်တည်နေတဲ့အတွက် လက်ရှိချန်ပီယံတို့ သိပ်တော့မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။
ခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းတွေဆိုရင် မန်စီးတီးနည်းနည်းရုန်းကန်ရလေ့ရှိတာကြောင့် ဘရိုက်တန်ကို ခက်ခက်ခဲခဲကစားရဖို့ရှိနေပြီး ဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်းသလို မထင်မှတ်ဘဲနဲ့တောင်သရေကျသွားမလားပဲ။
ချယ်လ်ဆီးနဲ့နောဝစ်ချ်ပွဲမှာတော့ အိုဝင်က ခပ်တည်တည်ပဲ ချယ်လ်ဆီးကို (၃-၀)ဂိုးပြတ်အနိုင်ပေးထားပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ လူကာကူ၊ ဗာနာတို့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေပေမယ့် အမှတ်ပေးဇယားအောက်ဆုံးက နောဝစ်ချ်ကို အနိုင်ရဖို့ သိပ်မခက်တာကြောင့် ဒီပွဲမှာတော့ အိုဝင်နဲ့အတူရပ်တည်လိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ..ဒိုင်တွေကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ အိုဝင်ကတော့ ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်(၉)အတွက် ခန့်မှန်းမှုတွေလုပ်လိုက်ပါပြီ။
အိုဝင်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက်အထိလွဲဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ . .
Arsenal v Aston Villa (Match to be drawn 1-1)
Chelsea v Norwich City (Chelsea to win 3-0)
Crystal Palace v Newcastle (Crystal Palace to win 2-1)
Leeds Utd v Wolves (Match to be drawn 1-1)
Everton v Watford (Everton to win 3-1)
Southampton v Burnley (Burnley to win 1-0)
Brighton v Man City (Man City to win 2-0)
West Ham v Tottenham (West Ham to win 2-1)
Brentford v Leicester (Leicester to win 2-1)
Man Utd v Liverpool (Liverpool to win 2-1)
ယူႏိုက္တက္နဲ႔ပြဲမွာ လီဗာပူးလ္ႏိုင္မယ္လို႔ အိုဝင္ခန႔္မွန္းလိုက္တဲ့အတြက္ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြစိတ္ေအးရၿပီ . .
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ပြဲေတြဆို တလြဲေတြခ်ည္းပဲဆက္တိုက္ခန႔္မွန္းေနတဲ့ ဆရာႀကီးအိုဝင္ကေတာ့ လီဗာပူးလ္နဲ႔ပြဲမွာ သူ႔အသင္းေဟာင္း လီဗာပူးလ္ႏိုင္မယ္လို႔ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အတြက္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနလို႔ရပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္(၈)မွာတုန္းက ဝက္ဖို႔ဒ္-လီဗာပူးလ္၊ မန္စီးတီး-ဘန္ေလ၊ ဘရန႔္ဖို႔ဒ္-ခ်ယ္လ္ဆီးပြဲေတြမွာသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွန္ၿပီး က်န္တဲ့ပြဲေတြအကုန္လုံး ‘ဂ်င္း’ထည့္ခဲ့တဲ့ အိုဝင္ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ၿဗိတိန္’ဂ်င္း’က ဘယ္လိုအရသာရွိလဲဆိုတာ ထပ္ျပဦးမယ့္အေနအထားပါပဲ။
ပြဲစဥ္(၉)အတြက္ ပြဲဦးထြက္ျဖစ္တဲ့ အာဆင္နယ္-ဗီလာပြဲမွာ (၁)ဂိုးစီသေရက်မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ထိပ္ဆုံးပြဲတည္းက တလြဲခန႔္မွန္းခဲ့တဲ့ အိုဝင္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးသာယုံၾကည္ၾကပါေတာ့ . .ဒါေပမဲ့ ေက်နပ္စရာေကာင္းတာက ယူႏိုက္တက္-လီဗာပူးလ္ပြဲမွာ လီဗာပူးလ္ကို အႏိုင္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေျခစြမ္းပိုင္း၊ ရလဒ္ပိုင္းေတြအရ လီဗာပူးလ္ကို ပိုႀကိဳက္မိေပမယ့္ အခု အိုဝင္ကလည္း လီဗာပူးလ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားလို႔ နည္းနည္းေတာင္ ဇေဝဇဝါျဖစ္သြားမိတယ္။ အိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္မွာ လီဗာပူးလ္တို႔ (၂-၁)ဂိုးရလဒ္နဲ႔ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မယ္လို႔ အိုဝင္က ခန႔္မွန္းထားၿပီး ကိုယ္တိုင္က လီဗာပူးလ္ကို ႀကိဳက္ေပမယ့္ အိုဝင္ေၾကာင့္ ယူႏိုက္တက္ကို သေရတစ္မွတ္ေတာ့ေပးခ်င္ပါတယ္။
ဘ႐ိုက္တန္-မန္စီးတီးပြဲမွာေတာ့ ဘယ္အသင္းႏိုင္မလဲဆိုတာ ကေလးကိုသြားေမးရင္ေတာင္ရေလာက္တဲ့ပြဲမ်ိဳးမွာ အိုဝင္က ဆရာႀကီးပီပီ မန္စီးတီးကိုေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ အိုဝင္က မန္စီးတီးအသင္း(၂-၀)ဂိုးျပတ္ႏိုင္မယ္လို႔ဆိုထားေပမယ့္ ဘ႐ိုက္တန္အသင္းဟာ အဲဗာတန္ကိုရႈံးနိမ့္ၿပီးကတည္းက ပရီးမီးယားလိဂ္(၅)ပြဲဆက္ရႈံးပြဲမရွိဘဲ မန္စီးတီးရဲ႕ေအာက္ အဆင့္(၄)ေနရာမွာ အံ့အားသင့္စရာရပ္တည္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိခ်န္ပီယံတို႔ သိပ္ေတာ့မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။
ခံစစ္ပိတ္ကစားတဲ့အသင္းေတြဆိုရင္ မန္စီးတီးနည္းနည္း႐ုန္းကန္ရေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ဘ႐ိုက္တန္ကို ခက္ခက္ခဲခဲကစားရဖို႔ရွိေနၿပီး ဂိုးျပတ္ႏိုင္ဖို႔ခဲယဥ္းသလို မထင္မွတ္ဘဲနဲ႔ေတာင္သေရက်သြားမလားပဲ။ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ေနာဝစ္ခ်္ပြဲမွာေတာ့ အိုဝင္က ခပ္တည္တည္ပဲ ခ်ယ္လ္ဆီးကို (၃-၀)ဂိုးျပတ္အႏိုင္ေပးထားပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းမွာ လူကာကူ၊ ဗာနာတို႔ ဒဏ္ရာျပႆနာေတြရွိေနေပမယ့္ အမွတ္ေပးဇယားေအာက္ဆုံးက ေနာဝစ္ခ်္ကို အႏိုင္ရဖို႔ သိပ္မခက္တာေၾကာင့္ ဒီပြဲမွာေတာ့ အိုဝင္နဲ႔အတူရပ္တည္လိုက္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ..ဒိုင္ေတြကို လုပ္ေကြၽးေနတဲ့ အိုဝင္ကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္ပြဲစဥ္(၉)အတြက္ ခန႔္မွန္းမႈေတြလုပ္လိုက္ပါၿပီ။ အိုဝင္ရဲ႕ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိလြဲဦးမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္လားဗ်ာ . . .
⚽ စနေညအတွက် စျေးအရ မန်စီးတီးဂိုးအောက် အကောင်းဆုံး (ဂိုးမင်းသား)